साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल भाेलि भुटानसँग भिड्दै, कस्तो आउला नतिजा ? - Everest Dainik - News from Nepal
साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल भाेलि भुटानसँग भिड्दै, कस्तो आउला नतिजा ?
बंगलादेश, भदौ २० । पहिलो खेल गुमाएर दबाबमा परेको नेपालले साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को समूह ‘ए’ को आफ्नो दोस्रो खेलमा बिहीबार भुटानको सामना गर्दै छ । नेपाललले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग २-१ को हार व्यहोरेको थियो ।
यही हारले नेपाल दबाबमा छ । भुटानले पनि आफ्नो पहिलो खेल आयोजक राष्ट्र बंगलादेशसँग २-० ले गुमाएको थियो । यस्तोमा दुवैका लागि भोलिको खेल महत्वपूर्ण रहने छ । यस खेलमा नेपालले आफू अनुकुल नतिजा निकाल्न सकेन भने लिग चरणबाटै बाहिरने सम्भावना रहन्छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल भर्सेस भुटानः नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो [LIVE]
त्यसैले यो खेल नेपालको लागि गर या मरको स्थिति हो । भुटानको सामना गर्नुअघि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले यो खेललाई लिएर आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
यस्तै, भुटानी प्रशिक्षक ट्रेभर मोर्गनले नेपाल विरुद्धको खेल सबै प्रकारले खुल्ला रहने बताएका छन् । उनका अनुसार दुवै टिमलाई जित आवश्यक रहेकोले यो खेलमा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल भर्सेस भुटानः नेपाललाई पहिलो झड्का, बिनोद शून्य रनमै आउट !
याे पनि पढ्नुस साफ च्याम्पियनसिप : जित्नै पर्ने दबाबमा नेपाल
अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपमा नोपल र भुटानबीच २ खेल मात्रै भएका छन् । जसमा दुवै खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । नेपालले सन् २००३ को साफ च्याम्पियनसिपमा भुटानलाई बंगबन्धु रंगशालमा नै भएको खेलमा २-० ले हराएको थियो भने सन् २००५ मा कराँचीमा भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई ३-१ ले हराएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Nepal Vs Bhutan, Saff